Shirkii wadahadlada xukuumada iyo xisbiyada oo natiijo la,aan ku soo dhamaaday caawa | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on May 26, 2015 by sdwo · No Comments
Shirkii wadahadlada xukuumada iyo xisbiyada oo ku qabsoomay guriga madaxweyne ku xigeenka ayaa markii sedexaad manta ku dhamaaday natiijo la,aan, shirkan oo socday manta gelinkii danbe oo dhan ayey dadku aad uGu dhegtaayeen waxa ka soo bixi kara, inkastoo la sii saadalineyey inuu natiijo la,aan ku dhamaandoono.
Xukuumada ayaa iyadu ku adkaysanaysay inaan marnaba waxba laga bedeli Karin go,aankii guurtidu ay uGu kordhisay 22ka bilood, halka xisbiga wadanina uu taagnaa inaanu golaandonin marnaba mudo ka baxsan mudadii ay komishanka dooroshoyinku qabteen ee sanadka ahayd. halka xisbiga UCID oo isagu isku deyey inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac oo ay iskugu yimaadaan heshiiska xisbiyada ee ahaa sanadka iyo shanta bilood.
Wararku waxay sheegayaan in ay xukuumadu tidhi waxaanu ogolaandoonaa mudadaas xisbiyadu isla qaateen ee ahayd November 2016 laakiin dhawr cisho aanu ka soo fakirno sidii aanu guurtidana u soo ogolaysiinlahayn, hase yeeshee dalabkaasi waxa ku gacansaydh xisbiga wadani.
Dhinaca kalana waxa la sheegayaa sidii wararka maalmahanba ay qorayeen in loo yeedhay wadadii uu xirsi kula kulmay masjidka cali mataan ee uu ka dalbaday inay soo dhexgalaan dhexdhexaadinta, waxaana la sheegay in wadaadan loo yeedhay qaybtii danbe ee kulankii maantu markii uu sii kululaayday inkastoo la sheegayo in xisbiyada mucaaridku ku gacansaydheen dhexdhexaadintooda oo ay u arkaan inay xukuumadu soo dalbatay.
Waxa la dhawraabaa waa shirarka jaraaid ee sedexdii dhinac ee isku hayey ay qabtaan iyo siday hadalka u dhigaanba.